อัลทิมา ไลฟ์ พม่า - อัลทิมาไลฟ์ , ultimalife, app Jelala ,Jelala Ultima Life , โหลด app Jelala,Ultimalife Hybrid Online Marketing - Product - Service
อัลทิมา ไลฟ์ พม่า
ဗမာညီအစ်ကိုများ Altima Life ကုန်သည်များစုဆောင်းခြင်း
ထိုင်းနိုင်ငံရှိမြန်မာညီအစ်ကိုများအတွက် Big Project အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းရန်ကျွမ်းကျင်သူများအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
စတော့ဈေးကွက်တွင်အစားအစာဖြည့်စွက်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံ ၈၀% ရှိသည်။
10 နှစ်ကျော်စီးပွားရေးနားလည်မှုနှင့်အတူ Professional ကမန်နေဂျာ
ဈေးကွက်မဟာဗျူဟာတစ်ခုတည်း 80% MLM 20%
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ဘတ်သန်း ၅၀ အထိအသိပညာရှိစေရန်ကြော်ငြာခြင်းကိုဖိအားပေးခြင်း
Star တင်ဆက်သူ စက်မှုလုပ်ငန်း၏ရှေ့တန်းမှမှာ5ကလူ
DOD မှ Ultima Life ကိုအဘယ်ကြောင့်ရွေးချယ်ရမည်နည်း။
တစ်ခုတည်းသောစနစ်နှင့် MLM နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောစီးပွားရေးအစီအစဉ်
၁။ လက်လီအမြတ် ၂၅ မှ ၃၀% (လက်ကျန်ငွေကိုမထိန်းသိမ်းပါနှင့်)
၂။ ငွေပြန်အမ်းခြင်း၊ ၅-၂၀% ပြန်အမ်းခြင်း (ချိန်ခွင်လျှာကိုထိန်းသိမ်းရန်မလိုအပ်ပါ)
၃။ ၂၀% လွှဲပြောင်းကြေး ၅ လွှာပေးဆောင်ပါ (လက်ကျန်ငွေကိုထိန်းသိမ်းရန်မလိုအပ်ပါ)
4. လက်ကျန်ငွေစီမံခန့်ခွဲမှုအခကြေးငွေ 10-15% (ချိန်ခွင်လျှာကိုထိန်းသိမ်းရန်မလိုအပ်)
5. ၃၀% ကိုက်ညီသောအခကြေးငွေ။ ထိပ်တန်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ၀ န်ဆောင်မှု (၅၀၀pv သို့မဟုတ်ဘတ် ၁၂၀၀) အတွက်ပေးချေပါ။
1 PV ရမှတ် = 1.60-2 ဘတ်
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော Ultima Life အမှတ်တံဆိပ်ကိုအသုံးပြုသည်။
သဘောကျသည်ဖြစ်စေမသုံးရန်ကြိုးစားပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစား။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုလုပ်လိုသောအခါ
သငျသညျစတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် wade ဖို့အဆင်သင့် ဒါပေမယ့်သံသယရှိပါ
အကြံပေးရန်လက်ထောက်တစ် ဦး ရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်ကူညီရန်အဖွဲ့ရှိသည်
รับสมัครตัวแทนจำหน่าย อัลทิมา ไลฟ์ พี่น้องชาวพม่า
ขอเชิญมืออาชีพทุกท่าน ร่วมทีม Project ใหญ่ สำหรับพี่น้องชาวพม่า ในประเทศไทย
ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ กรุงเทพมหานคร,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ กระบี่,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ กาญจนบุรี,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ กาฬสินธุ์,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ กำแพงเพชร,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ ขอนแก่น,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ จันทบุรี,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ ฉะเชิงเทรา,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ ชลบุรี,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ ชัยนาท,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ ชัยภูมิ,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ ชุมพร
ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ เชียงราย,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ เชียงใหม่,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ ตรัง,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ ตราด,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ ตาก,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ นครนายก,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ นครปฐม,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ นครพนม,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ นครราชสีมา,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ นครศรีธรรมราช
,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ นครสวรรค์,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ นนทบุรี,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ นราธิวาส,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ น่าน,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ บึงกาฬ,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ บุรีรัมย์,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ ปทุมธานี,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ ประจวบคีรีขันธ์,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ ปราจีนบุรี,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ ปัตตานี
,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ พระนครศรีอยุธยา,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ พังงา,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ พัทลุง,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ พิจิตร,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ พิษณุโลก,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ เพชรบุรี,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ เพชรบูรณ์,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ แพร่,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ พะเยา,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ ภูเก็ต,
ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ มหาสารคาม,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ มุกดาหาร,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ แม่ฮ่องสอน,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ ยะลา,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ ยโสธร,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ ร้อยเอ็ด,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ ระนอง,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ ระยอง,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ ราชบุรี,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ ลพบุรี,
ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ ลำปาง,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ ลำพูน,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ เลย,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ ศรีสะเกษ,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ สกลนคร,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ สงขลา,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ สตูล,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ สมุทรปราการ,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ สมุทรสงคราม,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ สมุทรสาคร,
ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ สระแก้ว,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ สระบุรี,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ สิงห์บุรี,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ สุโขทัย,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ สุพรรณบุรี,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ สุราษฎร์ธานี,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ สุรินทร์,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ หนองคาย,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ หนองบัวลำภู,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ อ่างทอง
,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ อุดรธานี,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ อุทัยธานี,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ อุตรดิตถ์,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ อุบลราชธานี,ทำธุรกิจ อัลทิมา ไลฟ์ อำนาจเจริญ
tags: ชาวพม่าทำออนไลน์ในประเทศไทยลงทุนธุรกิจสำหรับชาวพม่าศูนย์ทำธุรกิจสำหับชาวพม่าในประเทศไทยสร้างรายได้ชาวพม่าอัลทิมา ไลฟ์ พม่า